Ra’iisul wasaare Kheyre oo sheegay in soomaaliya ay ku socoto dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa bogaadiyey taageerada iyo mashaariicda horumarineed ee dawladda Mareykanku ay la garab taagan tahay Soomaaliya Kadib heshiis horumarineed oo ay kala saxiixdeen Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adda USAID kaasoo ku kacaya lacag dhan 300 Milyan oo Dollar.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku tilmaamay heshiiskan inuu yahay horumar iyo tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka dib-u- dhiska iyo dib-u-soo kabashada Soomaaliya.
Dowlada Maraykanka ayuu ku amaanay sida ay uga go’an tahay taageeradooda aan shuruudu ku xirnayn.
Maanta waa maalin kale oo macne ku yeelan doonta mustaqbalka, dawladnimada, nabadda iyo horumarinta Soomaaliya, waxaan uga mahadcelinayaa dawladaha aan saaxiibada nahay taageerada ay la garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Soomaaliya waxaa ay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska, waxaan leenahay hay’ado shaqeynaya oo adduunku kalsooni ku qabo diyaarna u ah isla-xisaabtan iyo daah-furnaa ayuu yiri R/Wasaare Khayre.
← Madaxweynaha Maraykanka oo maanta la filayo inuu Quddus u aqoonsado caasimada Israaiil
Turkish PM says Trump’s plan for Jerusalem unlawful →